လိင်မှုရေးရာပျော်ပါးဖို့ အတွက် ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ ( ၁၀ ) နိုင်ငံ – MMPost
လိင်မှုရေးရာပျော်ပါးဖို့ အတွက် ကမ္ဘာပေါ်က အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ ( ၁၀ ) နိုင်ငံ
နိုင်ငံတကာ March 12, 2018
အခုဖော်ပြမှာကတော့ နှစ်စဉ်အလုပ်သမား သန်းချီ အဝင်အထွက်ရှိတဲ့
အပန်းဖြေခရီးထွက်တယ်ဆိုတာက တကယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းပါတယ် ။ လူတော်တော်များများဟာ အားလပ်ရက်တွေမှာ သူတို့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာမျိုးပြုလုပ်ပြီး အပန်းဖြေလေ့ရှိကြတယ် ။ ဥပမာရှော့ပင်ထွက်တာမျိုး…ရှုခင်းကြည့်တာမျိုး…ဒါမှမဟုတ်လည်း ကမ်းခြေမှာ ကစားတာမျိုးပေါ့ ။ တစ်ချို့လူတွေကတော့ အကြိုက်တစ်မျိုးရှိကြတယ်… .နိုင်ငံတွင်းက အစားအသောက်တွေ ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာ သူတို့အကြိုက်မဟုတ်တတ်ကြဘူး ။ တစ်ချို့လူတွေဆိုရင် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုအတွက် နိုင်ငံရပ်ခြားအထိခရီးသွားလာတတ်ကြတယ် ။
ဒီလိုပဲ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ဖြေမှုကိုခုံမင်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလည်းရှိတယ် ။ များသောအားဖြင့်တော့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေဟာအမျိုးသားတွေဖြစ်ပြီးတော့ ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့သူတွေကတော့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြတယ် ။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာ တရားဝင်ရော တရားမဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လိင်အလုပ်သမားသမားပေါင်း သန်းချီရှိတယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ် ။
ဒါကတော့ လိင်လုပ်ငန်းမှာ (နာမည်ဆိုးနဲ့) နာမည်ကျော်တဲ့ နိုင်ငံ ၁၀ နိုင်ငံပါ
၁၀. ဒိုမီနီကန် ပြည်ထောင်စု
ကာရေဗီရန်နိုင်ငံတွေဟာ လိင်လုပ်ငန်းမှာ တိုးတက်လာကိုတွေ့ရပါတယ် ။ ဒိုမီနီကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုရင် လိင်လုပ်သားအမျိုးသမီးပေါင်း ၆ သောင်းကနေ ၁သိန်းထိရှိနေပါတယ် ။ အမေရိကန်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကြောင့် ဒီအလုပ်ဟာတကယ်ကို အောင်မြင်နေပါတယ် ။ ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားပေမယ့်ကလေးတွေနဲ့တော့ လိင်ဆက်ဆံခွင့်မရှိပါဘူး ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့ ပြည့်တန်ဆာတော်တော်များများဟာအသက်မပြည့်ကြသေးတာပဲ ။
၉ . ကမ္ဘောဒီးယား
ကမ္ဘောဒီယားအစိုးရက ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကို တင်းကြပ်ထားပေမယ့် ဥပဒေက ယိမ်းယိုင်နေတဲ့အတွက် ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းဟာတွင်ကျယ်နေပါတယ် ။ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မိန်းကလေးတွေ နဲ့ အပျိုစင်ဘဝကိုရောင်းချတဲ့ကောင်မလေးတွေကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းဟာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ် ။ တစ်ချို့မိဘတွေဆိုင် သူတို့ရဲ့သမီးအပျိုဖော်ဝင်တဲ့အခါမှာ ပြည့်တန်ဆာအဖြစ်ရောင်းစားကြပါတယ် ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်း စက်ရုံတွေဆီကို ရောင်းစားပါတယ် ။ ကမ္ဘောဒီယားပြည့်တန်ဆာတွေရဲ့ဘဝကတော့ တကယ်ကိုကြမ်းတမ်းပါတယ် ။
အမ်စတာဒန် အကြောင်းကတော့ အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ။ အဖော်အချွတ်ရှိုးပွဲတွေ ကလပ်တွေနဲ့ လိင်မှုကိစ္စပျော်ပါးဖို့လာတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေအတွက် ပြည့်တန်ဆာဆိုင်တွေပါဖွင့်ပေးထားပြီး အကျယ်တဝင့်လုပ်ကိုင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါ ။ ကောင်မလေးတွေဟာ မှန်တွေရဲ့နောက်ကနေ ခရီးသွားတွေကို ထင်ထင်ပေါ်ပေါ်ပဲ မြူဆွယ်နေတာကို မြင်ရမှာပါ ။ ဒီ တရားဝင် လည်ပတ်နေတဲ့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ သူတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကမ်းလှမ်းပေးထားပါတယ် ။
ကမ္ဘောဒီယားလိုပဲ ကန်ညာမှာဆိုရင် ဆင်းရဲတဲ့ပြီးပညာမတတ်ကောင်မလေးတွေဟာ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ဆိုရင် ပြည့်တန်ဆာအလုပ်ကို စတင်လုပ်ကိုင်ကြပါတယ် ။ ဒီငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုတဲ့လုပ်ငန်းကလည်းသူ့အခြေအနေနဲ့သူရှိပါတယ် ။ ကူးစက်ရောဂါတွေအကြောင်း သူတို့မသိရှိတဲ့အတွက် နေ့စဉ်ပျော်ပါးတဲ့သူတွေ မြောက်များစွာလာရောက်ကြသော်လည်း လိင်လုပ်သား ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်သာ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုပါတယ် ။ ပြဿနာကတော့ ကန်ညာမှာ AIDS ဖြစ်ပွားနှုန်းတိုးလာတာပါပဲ ။ ကန်ညာရဲတွေဟာ ဒီအန္တရယ်ကိုလျစ်လျူရှုထားပြီးတော့ လာရောက်ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေကိုတောင် တွန်းအားပေးနေပါသေးတယ် ။
ဖိလစ်ပိုင်မှာတော့ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ကိုင်ခြင်းဟာတရားမဝင်ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလုပ်ငန်းဟာ အသက်ဝင်လည်ပတ်လျက်ရှိပြီး ဥပဒေကို လှောင်ပြောင်နေပါတယ် ။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၄၀ ကနေ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ လိင်ကိစ္စပျော်ပါးဖို့အတွက်သက်သက် ဖိလစ်ပိုင်ကိုလာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ် ။ပြည့်တန်ဆာပေါင်း ၅ သိန်းနီးပါးရှိပြီး များသောအားဖြင့်တော့ ဘားမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေးတွေပဲဖြစ်တယ် ။ ဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီသည်တွေကို မရိုးစေနိုင်တဲ့အရာတွေပါပဲ ။
အခုတစ်ခါလည်း ကမ္ဘောဒီးယားကိုထပ်ပြောရလိမ့်မယ် ။ ဆေးခြောက်ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ လိင်ဖျော်ဖြေမှုမှာနာမည်ဆိုးတဲ့ကျော်ကြားတဲ့နေရာပါပဲ ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဖောက်သည်တွေဆိုရင် ကြေးနဲနဲ ဒါမှမဟုတ် ညှိနှိုင်းမှုနဲ့ လုပ်ကိုင်တဲ့ ပြည့်တန်ဆာတွေများစွာရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ် ။ လာရောက်ပျော်ပါးတဲ့သူတွေအတွက်တော့ ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်လှလှ နဲ့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးလိုမျိုးခပ်မိုက်မိုက်လေးတွေက အသင့်စောင့်နေကြပါတယ် ။
ဒီနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာလှည့်ပျော်ပါးသူတွေများပြားစွာလာရောက်တဲ့အတွက် ကလေးသူငယ်လိင်ကုန်ကူးမှု ပြဿနာဖြစ်လာရတာပါ ။ ဒီနိုင်ငံဟာ ပြည့်တန်ဆာမှုကို ဒုစရိုက်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံပါပဲ ။ဒါပေမယ့်လည်း ပြည့်တန်ဆာအိမ်တွေလည်းရှိနေသလို အွန်လိုင်းပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေဟာလည အွန်လိုင်းပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းတွေဟာလည်း ကျယ်ပြန့်နေပါတယ် ။ အင်တာနက်ကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းဟာတွင်ကျယ်နေပြီးတော့ အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ ခရီးသွားလိင်လုပ်ငန်းဟာလည်း တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါတယ် .
၃ . စပိန်
ပြည့်တန်ဆာလုပ်ခြင်းဟာစပိန်မှာတော့ တရားဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ဥရောပမှာ တိုးရစ်တွေ အဓိကလာရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် ။ Madrid ကတော့ ထိပ်ဆုံးမြို့တော်ပါပဲ ။ ဘာစီလိုနာကလည်း တိုးရစ်တွေအတွက် ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့နေရာတစ်ခုပါပဲ ။ အံအားသင့်စရာကောင်းတာက စပိန်က လိင်အလုပ်သမားတွေဟာ လူကုန်ကူးခံရပြီး ကျွန်အဖြစ် ရောင်းစားခံရတဲ့ တောင်အမေရိက က အမျိုးသမီးတွေပါပဲ
ဘရာဇီးရဲ့ လိင်ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာကတော့ ကမ်းခြေအလှအပတွေ တောတောင် အတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပါပဲ ။ Carnaval လိုပွဲတော်ချိန်တွေမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေလာရောက်မှု အလွန်များပြားပါတယ် ။ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ဘရာဇီးသူလေးတွေကလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကအကူအညီပေးပါတယ် ။
အားလုံးရဲ့အထက်မှာတော့ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ The Hangover Part2ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဘန်ကောက်မြို့တော်ပါပဲ ။ ထိုင်းပြည့်တန်ဆာ ဥပဒေတွေဟာ တင်းကြပ်မှုမရှိတဲ့အပြင် နိုင်ငံတွင်းမှာလည်း ပျော်ပါးတဲ့သူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့် လာရောက်လည်ပတ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ အကောင်းဆုံး အသိုက်အမြုံတစ်ခုပါပဲ ။ ထိုင်းတော်တော်များများဟာ မည်သည့်လိင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိတဲ့သူကိုမဆိုလက်ခံပြီးပျော်ပါးပါတယ် ။ ဒီလုပ်ငန်းမှာ Ladyboys ဆိုတဲ့အခြောက်တွေတောင်မှ ပါဝင်ပါတယ် ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပြည့်တန်ဆာဦးရေ ၃သန်းနီးပါးရှိပြီး သုံးပုံတစ်ပုံကတော့ အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပါ ။ ပြည့်တန်ဆာ တော်တော်များများဟာ ပြန်ပေးဆွဲခံထားရတဲ့သူတွေဖြစ်ပေမယ့် ဒီလုပ်ငန်းဟာ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နေပါသေးတယ် ။
ဘာသာ (၇)မျိုး အထိ ပြောတတ်တဲ့ (၄)နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး
ရုရှနိုင်ငံ မော်စကိုမြှို့ မှာနေထိုင်တဲ့ Bella Devyatkina အမည်ရတဲ့ လေးနှစ်အရွယ် ကောင်မလေး တစ်ယောက်ဟာ ဘာသာ စကား (၇)မျိုးကို ပြောတတ်ပါတယ်။ အဲဒီ ကောင်မလေး ဟာ ယခုရက်ပိုင်းမှာတော့ ရုရှသတင်းဌာနတွေရဲ့ ခေါင်းစီး မှာ နေရာယူလျှက်ရှိပြီး၊ ဒီလို အခြေအနေဟာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်အတွက်သာမက လူကြီးတွေထဲမှာပင် …